8 Imibono Ehamba phambili Yokuzalwa | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Ukuhambela i-U.S.A > 8 Imibono Ehamba phambili Yokuzalwa
Kulo nyaka unethuba lokuhlola izimangaliso zomhlaba njengoba imithetho yezokuvakasha iqhubeka yenziwa ibe nhle. Izindawo zokuvakasha ebezivaliwe phambilini zivulwa kancane kancane njengoba umhlaba ulungela ukuhlala nalo bhubhane. Nazi 8 Imibono Ehamba phambili Yezinsuku Zokuzalwa Ku 2021 okufanele ucabangele.
Izincwajana zemininingwane travel kuyindlela kakhulu imvelo ukuhamba. Lesi sihloko sabhalwa sokuba umuntu afunde izindlela zemininingwane Ukuvakasha esenziwa Londoloza Isitimela, I Eshibhe zemininingwane Amathikithi Iwebhusayithi In The World.
Lesi sifunda siseMpumalanga yeMassachusetts futhi singesinye sezindawo ezihanjelwe kakhulu oGwini lwaseMpumalanga. Ngo 2021, isabeka phezulu amashadi njengenye yezindawo ezihamba phambili zokuhamba ngosuku lokuzalwa. Kuningi ongakubona kule ndawo kufaka phakathi amabhishi amahle, amapaki, izibani zomlando, nokuzijabulisa okuningi kwemvelo. Ngenkathi uvakashela leli dolobha, kubalulekile ukuthi ubheke indawo yokuhlala ephephile. Ukuqashwa kwamaholide kwenza ukukhetha okuhle kakhulu uma kuziwa kulokhu. Esikhundleni sokuhlala egumbini lehhotela eliminyene, ungakhetha ukuhlala kwelinye lamaCape Cod amaningi futhi kanokusho ukuqashwa kwamaholide. Lokhu kuzokunika umuzwa ofana nowasekhaya ngoba uzokwazi ukufinyelela ezintweni ezifana nekhishi negumbi lokuwasha kanye namadivayisi afana nalawa Imishini ye-HVAC. Lokhu kuza kahle ikakhulukazi lapho okungenzeka babehamba nomkhaya wakubo njengoba uzoba nethuba lokwenza ukudla okunomsoco futhi uhlanze lapho uhlala khona. Ngaphezu kwalokho, kunezinga elithile lobumfihlo ekuqashweni kweholide ngokuqhathaniswa nehhotela.
2. Imibono Ehamba phambili Yezinsuku Zokuzalwa Ku 2021: I-Alaska
Yize ngokwehlukana ngokwendawo ne-United States, I-Alaska ingenye yezindawo ezithakazelisa kakhulu nezihle ukuvakashela. Yindawo enhle yokuzalwa yeholideyini yezingane nezingane. Lapho uya kule ngxenye yezwe, uzothola ukubona izinguzunga zeqhwa ezikude, izintaba eziphakeme, i-moose ebabazekayo, 12Amabhere ama-ft-tall, kanye nolwandle oluningi olusele dengwane. Phakathi kwezindawo eziphezulu ongazivakashela e-Alaska yiDenali National Park, lapho uzobona khona amabhere, izimpisi, nezinyamazane. Uzothola nethuba lokuhamba ngasemfuleni iSavage njengoba ubabaza amanzi amile. Uma uthanda ukudoba, ungathola ithuba lokuvakashela isikhungo sokudoba sase-Alaska, Homer. Ngaphezu kwalokho, ungashiya ihlane uye e-Anchorage okuyidolobha elikhulu kunawo wonke e-Alaska. Lapho uvakashela i-Alaska nomndeni, kufanele uqinisekise ukuthi uvakashela i-Arctic Circle Day Tour kusuka eFairbanks naseMatanuska Glacier Full day Tour. Lezi zivakashi ezimbili zizoqedela iholide lakho lase-Alaska.
3. IGrand Canyon E-Arizona
Yize uthola izivakashi ezingaba yizigidi ezinhlanu minyaka yonke, IGrand Canyon isephakathi kwezindawo ezinhle kakhulu ongazivakashela 2021. Kufana uphawu lwendawo oludume kakhulu e-United States futhi ibukeka yinhle kuzo zonke izinhlangothi. Ungahambela izintaba kule ndawo noma uthathe uhambo lwezindiza ezinophephela emhlane ukuze ujabulele ukwakheka komhlaba ngokubuka kwasemoyeni. Ungangena eNyakatho naseNingizimu Rims kusuka ezinhlangothini eziphambene zomhosha. Iningi labantu likhetha ukuvakashela i- IGreat Canyon National Park’s ISouth Rim ngoba ihlala ivulekile ngisho nasebusika. Ungahamba ngemoto ngemoto ngasese noma usebenzise amabhasi we-shuttle yokuvakasha kule ndawo ukuze ujabulele ukubuka kwasehlane. EGrand Canyon, ungathola ukubona okungaphezulu kwe- 447 izinhlobo zezinyoni ezikhona, ikanise ubusuku bonke ehlane, futhi uhlanganyele emisebenzini emnandi efana ne-rafting. Kulesi sifunda, amathuba amnandi awapheli!
4. Umqondo Ohamba Phambili Wokuzalwa 2021: ICrater Lake National Park
Kutholakala e-Oregon, ICrater Lake ithatha amakhilomitha-skwele angamashumi amahlanu nantathu. Ichibi lihlala ngaphakathi kweNtaba iMazama eyakhiwa ngaphezulu 7000 eminyakeni edlule ngokudubula. Inamanzi aluhlaza okwesibhakabhaka ahlinzeka ngesibonakaliso esimangalisayo esizokushiya umangele. Ubuhle baleli chibi ukuthi ungahamba ngokuntweza nge-scuba cishe 2000ft uma ufisa lolo hlobo lobumnandi. Ukujabulela uhambo lwakho oluya kule ndawo, udinga ukuchitha izinsuku ezintathu uhlola zonke izimangaliso ezilethwa echibini.
5. Disney Umhlaba
Owokugcina ohlwini yiDisney amapaki wetimu nezindawo zokungcebeleka e-Orlando. Le ndawo ehehayo yenza indawo engcono kakhulu yokuhamba yosuku lokuzalwa yabantu abakhishwe ngokuphelele emisebenzini yabo yansuku zonke. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi kubahlengikazi abaqinisekisiwe abasanda kuqeda i- NCLEX RN ukuhlolwa futhi badinga iholidi elijabulisayo. Unenhlanhla ngabo, selokhu kwaqala unyaka, amapaki amaningi avuliwe futhi alungele ibhizinisi. Njengoba kunikezwe ukuthi ithandwa kanjani, le ndawo ivame ukugcwala ngakho kuzofanela uhlele ukuvakasha kwakho ngokuhlakanipha. Ukujabulela ukuhlala kwakho, uzodinga ukuhlala cishe 6-7 izinsuku. Ezinye zezinto ezikhangayo ozenzayold uhlose ukubona kufaka iPirates yaseCaribbean, Indiza kaPeter Pan phakathi kwabanye.
6. Izindawo ezihamba phambili zokuzalwa zosuku lokuzalwa 2021: IVenice E-Italy, Europe
Kutholakala enyakatho-mpumalanga ye-Italy, IVenice iyindawo yokubuka izihambi. Yinhlokodolobha yesifunda saseVeneto futhi yakhiwe 118 iziqhingi ezincane ezihlukaniswe yimisele. Lezi ziqhingi zixhunywe ngaphezu kwe- 400 amabhuloho. Ayikho imigwaqo, okusho ukuthi akukho traffic enomsindo. Abantu bahamba ngezikebhe emiseleni, ukukhonza izivakashi ngezibonisi ezithile ezihlaba umxhwele ezingabonakali kwenye indawo. IVenice ibhekwa njengelinye lamadolobha ahluke kakhulu emhlabeni, ukuyifaka njengenye yezindawo eziphezulu zabahambi nabathwebuli zithombe ku- 2021. Ngaphezu kwalokho, IVenice yaziwa ngokuthandana ngendlela emangalisayo. IVenice ibuye ibe phezulu ohlwini oluningi kakhulu lamadolobha amahle emhlabeni. Kungenxa yokunikezwa kwayo okungajwayelekile komgwaqo, izakhiwo zokuvuna ezihlaba umxhwele, nezakhi zomlando ezitholakale kukho konke ukwakhiwa kwayo.
7. Izindawo ezihamba phambili zokuzalwa lapho uya khona 2021: iChibi iBaikal, Russia
Ukuba yizwe elikhulu kunawo wonke emhlabeni, I-Russia inokuningi engakunikeza kufaka phakathi amabhishi, izintaba, nezakhiwo zomlando. Nokho, IChibi iBaikal yilona elikhethwa kakhulu ngabahambi nabathwebuli bezithombe abaningi. Ingelinye lamachibi amadala aziwayo emhlabeni, nemibiko eminingi ethi ingaphezu kwe- 25 iminyaka eyisigidi ubudala. Futhi kuyichibi elijule kakhulu emhlabeni, ifinyelela ekujuleni okuphezulu kwe- 1642 amamitha. Yini enye? IBaikal yichibi lamanzi angenasawoti elikhulu kunawo wonke emhlabeni. Ngaphezu kwe 20% amanzi emvelo omhlaba ahlala kuleli chibi. Okwazungezile 5 izinyanga ngonyaka, ichibi lihlala limbozwe ngaphansi koqweqwe olujiyile. Nokho, kusenokwenzeka ukubona kujule njenge 40 amamitha ngaphansi kwawo. Okwazungezile 10 izinyanga ngonyaka, amanzi ayo ahlala ngaphansi kwezinga lokushisa elibandayo le 5 amadigri Celcius. Nokho, cishe ngenyanga ka-Agasti, izinga lokushisa layo likhuphukela phezulu 16 degrees Celsius, okwenza kube kuhle ngokubhukuda okusheshayo nangokudipha.
8. Udonga Olukhulu LweChina
Noma iChina isikhule yaba yizwe elithuthukile kwezobuchwepheshe namuhla, namanje awulahlekelwanga yinhle nokuthakazelisa eyayinakho ngenkathi kutholakala okokuqala. Kunokuningi okuhle nokungaqondakali ngeChina, kepha iGreat Wall ibeka phezulu zonke izilinganiso namazinga. Ngokwesisho esidumile samaShayina, "Akekho umuntu ongaba yiqhawe langempela ngaphandle kokuthi ubekhona kuDonga Olukhulu". Inwebeka ngaphezu kobude be- 6000 amakhilomitha, lesi sikhumbuzo esikhulu ngesinye sohlobo lwaso, futhi kufanele ukuvakashelwa kwabo bonke abahambi. Ukuphakama kwayo okulingene kuzungezile 6 ukuze 8 amamitha, Nokho, kudlula okungaphezu kuka 16 amamitha ekuphakameni kwawo okuphezulu. Ibanzi ngokwanele ukuthi ngaphezu kwe- 10 abahamba ngezinyawo bangahamba ngayo eceleni. Udonga lunezinqaba eziningi ezihlaba umxhwele, Nokho, amadala kunawo wonke abhalwa emuva ngekhulu lesi-7 BC. IGreat Wall yinto eyenzeka kanye-nje empilweni okumele ingaphuthelwa nganoma iyiphi imali.
8 Imibono Ehamba phambili Yezinsuku Zokuzalwa Ku 2021: Isiphetho
Ngenkathi kungenzeka ukuthi ukhansele iholide lakho ku- 2020 ngenxa yobhadane, usengathatha lolo hambo kulo nyaka. Nokho, qiniseka ukuthi uthatha zonke izinyathelo ongazigcina ku- izindleko zokuhamba. Kufanele uhlose okungenani ukuvakashela iCape Cod, I-Alaska, iGrand Canyon, ICrater Lake, kanye neDisneyworld. Qala ukuhlela uhambo lwakho namuhla ukuze ujabulele ukuhamba kwakho. Sincamela ukuhamba ngesitimela okuningi ngangokunokwenzeka ukuze ukwazi ukujabulela ukubukwa okuhle kakhulu.
Lapha e Londoloza Isitimela, sizojabula ukukusiza uhlele eyodwa yalezi 8 Imibono Ehamba phambili Yezinsuku Zokuzalwa Ku 2021 ngesitimela.
Ingabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwebhulogi lethu “Izindawo Ezihamba Phambili Eziyi-8 Ku-2021” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fzu%2Fbest-birthday-travel-ideas%2F - (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml, futhi ungashintsha i / fr ibe / ru noma / de nangezilimi eziningi.